Andao handehandeha an-tongotra! Sarin’ireo lalana sasany mahafinaritra indrindra ao Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Mahavalalanina ireo sakeli-dalana fandehanana an-tongotra ao Karaiba...
Voadika ny 02 Desambra 2021 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, 日本語, English
Ireo mpandeha an-tongotra (mpihani-tendrombohitra) mijanona mijery ny Lalana an-Tendrombohitra Manga (Blue Mountain Trail) malaza any Jamaika. Sary avy amin'i Junior Carson, nahazoana alalana.
Ankafizin'i Etazonia fatratra ny fitsangatsanganana an-tongotra, hany ka nanokana andro iray manontolo ho amin'izany izy: Andro Nasionaly ho an'ny Fandehandehanana an-tongotra, ankalazaina ny 17 Novambra. Na dia mety ho bitika amin'ireo 60.000 kilaometatra azon'i Etazonia hireharehana aza ny fanaovana dia an-tongotra ao Karaiba, manana mpandeha an-tongotra marobe ny faritra, ahafahana maka aina tsotra izao ny tazana, ary—tsy ao anaty valan'aretina COVID-19 ihany fa ao anaty krizin'ny toetrandro, izay miteraka fandrahonam-pisiana ho an'ny firenena nosy maro—mety ho zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny mifandray amin'ny zavaboary. .
Ao anatin'izany toe-tsaina izany, ireto misy sary vitsivitsy avy amin'ny faritany Karaiba isan-karazany izay mety hanome aingam-panahy anao fotsiny hanala vovoka amin'ny kiraro fianihanao ary hiditra amin'ny sakelidalana!
Volotsangana tsara tarehy
Fidirana ao amin'ny Katedralim-bolotsangana ao Chaguaramas, Trinidad. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Ao amin'ny Lohasahan'i Tucker ao amin'ny Valan-javaboarin'i Chaguaramas ao Trinidad, nomena azy ny anarana Katedralim-bararata satria milahatra manamorona ny lalana ireo tahony lavabe mba handrafitra lohalambo mitovy amin'ny bazilika. Nahazo aingam-panahy tamin'ity lalana ity, izay tsy niova nandritra ny 150 taona mahery ny sary hosodoko lokorano maromaro nataon'ilay mpanakanto malaza tamin'ny taonjato faha-19 tao Trinidad, Michel-Jean Cazabon.
Tazana amin'ny ranomasina manamorona ny lalana mankany amin'ny Station Tracking amin'ny hariva. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Miteronterona amin'ny tazamaso, izay manome topi-maso mahavariana ny Macqueripe Bay sy ny morontsiraka avaratra, miakatra mankany amin'ny Station Tracking ny sahafan-janabolana goavambe teo hatramin'ny Ady Mangatsiaka. Nampiasaina ho toby miaramilan'i Etazonia nandritra ny Ady Lehibe II i Chaguaramas, any amin'ny saikinosy andrefan'i Trinidad.
Ilay sahafan-janabolana nilaozana tao amin'ny Station Tracking, Chaguaramas, Trinidad. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Fianakaviana iray mandeha an-tongotra amoron-tsiraka avy ao amin'ny Harbour View ao amin'ny paroasin'i St. Andrew, mankany amin'ny tora-pasika Bob Marley any St. Thomas, Jamaika. Sary avy amin'i Paula-Anne Porter Jones, nahazoana alalana.
Anisan'ny mahasarika ny fitsangantsanganana Karaiba ny lalana maro mankany amin'ny tora-pasika, toy ity lalana any amin'ny morontsiraka atsimon'i Jamaika izay manomboka any St. Andrew, ilay paroasy misy ny renivohitra, Kingston, mankany amin'ny paroasy mifanila St. Thomas eo amin’ny tendrony atsimo atsinanan’ny nosy.
Ny morontsiraka avaratra-atsinanan'i Trinidad. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Betsaka ny lalan-tongotra manamorona ny morontsiraka avaratr'i Trinidad, anisan'izany Rio Seco, izay mitondra mankany amin'ny riandrano iray, Reniranon'ny Atsantsa, izay lalana mahafinaritra manamorona ny renirano miolikolika, ary ity lalana tsy nomena anarana ity matetika tsidihan'ny mponina ao an-toerana, izay mitondra mankany amin'ity tora-batokely mahafinaritra ity.
Breadnut Valley Estate, Maggotty, St. Elizabeth, Jamaika. Sary avy amin'i Maëlle Johnston, nahazoana alalana.
Tsy antsoina hoe “tanin'ny hazo sy rano” tsy amin'ny antony i Jamaika. Manana ny sasany amin'ireo toerana manaitra indrindra ao amin'ny faritra ny nosy, anisan'izany ity riandrano ity, ao amin'ny Breadnut Valley Estate any Jamaika, izay mivoaka ny lalana faleha, saingy mendrika ny hodiavina.
Riandranon'i Edith, Chaguaramas, any amin'ny saikinosy avaratrandrefan'i Trinidad, sy Riandranon'i Avocat, Blanchisseuse, manamorona ny morontsiraka avaratry ny nosy. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Mila dia tongotra mora sy fohy ny dia an-tongotra mankany amin'ny Riandranon'i Edith ao Trinidad mandra-pahatonga anao any amin'ny faritra be vato, any ambony, izay misy mila mianika ny sasany. Tena mihoatra noho ny rindrin-drano ny fianjeran-drano, satria mikoriana midina amin’ny faritra samihafa amin’ny tarehin’ny vatolampy midadasika ny rano — indrindra mandritra ny vanin-taonan’ny orana, izay mampitolagaga kokoa. Ny dia an-tongotra mankany amin'ny Avocat dia azo atonina avy amin'ny zotra (hafa), amin'ny alalan'ny lalana an-tanety amin'ny ankamaroany ny iray ary mila fandehanana mamakivaky ny Reniranon'i Marianne ny iray hafa.
Riandrano Trafalgar, Dominika. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Ahazoana aina tsara ny sakelika maharitra 10 ka hatramin'ny 15 minitra mankany amin'ny Riandranon'i Trafalgar izay mahavariana ao Dominika, fa raha mila maka aina alohan'ny hahatongavana amin'ny riandrano ianao, dia misy dobo solifara mafana azonao atao ny milomano eny an-dalana. Arakaraka ny fahakinganao, afaka mianika lavidavitra kokoa ianao ary milomano ao anaty dobo sy loharano ao ambanin'ny riandrano.
Ao amin'ny Blue Mountain Trail. Sary avy amin'i Susan Otuokon/Jamaica Conservation and Development Trust, nahazoana alalana.
Iray amin'ireo fifaliana lehibe amin'ny dia an-tongotra any Karaiba ny fahatsarany. Na dia mety ho henjana aza ny vanin-taona maina any Karaiba, mazàna mijoalajoala sy feno ravin-kazo ny lalana, manome tena fialana amin'ny hamafin'izao tontolo izao.
Ny lalana ao amin'ny Tendrombohitra Bull Head, ao Clarendon, Jamaika, ary ny lalana mankany amin'ny Tendrombohitra St. Catherine, Trinidad. Sarin'i Paula-Ann Porter Jones sy Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Fianakaviana Jamaikana maro no mitsangatsangana somary matetika; ny sary etsy ambony dia mampiseho olona mandeha miakatra eo amin'ny Tendrombohitra Bull Head, Clarendon, lalana mideza kokoa sy mitongilana kokoa noho ny lalana mankany amin'ny Tendrombohitra St. Catherine any Trinidad, izay feno rarivato ny lalana hatrany amin'ny The Ball — toby radar fampiasan'ny ny fahefan'ny sidina sivily ao amin'ny firenena.
Iray amin'ireo lalana maro mahavariana ao Dominika, amin'ny iray amin'ireo tampon'ny ala voajanahary ho tokotaniny ifotony ao amin'ny nosy. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Iray amin'ireo nosy Karaiba mahavariana indrindra amin'ny fitsangantsanganana an-tongotra i Dominica, feno ala mikitroka, renirano midadasika, riandrano mamelombelona sy loharano solifara, ary mazava ho azy, tora-pasika. Ny lalana etsy ambony, avaratry ny renivohitra, Roseau, dia eo anelanelan'ny 500-600 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, malefaka raha oharina amin'ny fahasarotan'ny sakeli-dalana hafa.
Tazana avy eny an-tampon'ny Tendrombohitra Turtle, Guyana. Sary avy amin'i Skye Hernandez, nahazoana alalana.
Na dia any amin'ny kaontinanta Amerikana Atsimo aza, dia heverina ho anisan'i Karaiba i Guyana, ary tena mahavariana tanteraka ny lalana ao aminy — manomboka amin'ny lalana maty hitsaka mankany amin'ny Riandranon'i Kaieteur, mankany amin'ny Tendrombohitra Sokatra (Turtle), ao anatin'ny tany ao atsimon'ny renivohitra Georgetown, ary manome tazana mahafinaritra ny ala Iwokrama avy eny an-tampony, izay 300 metatra ambonin'ny ranomasina.
Eo an-tampon'ny Blue Mountain Peak any Jamaika amin'ny maraina. Sary avy amin'i Junior Carson, nahazoana alalana.
Tahaka ny dia an-tongotra rehetra, mety ho sarotra ny lalana, saingy ny tazamaso kosa an — tsy lazaina intsony ny fahatsapana fahombiazana rehefa tonga any amin'ny toerana halehanao. Matetika mandeha aloha ireo mpandeha an-tongotra efa za-draharaha, mba hanararaotra ny ora maraina mangatsiaka kokoa, alohan'ny fiposahan'ny masoandro sy ny hafanana aterany izay manasarotra ny fiakarana. Ity no fotoana ahitanao vorona sy biby bebe kokoa, izay fanampin'ny traikefa.
Tazana avy amin'ny Tendrombohitra St. Catherine, Trinidad. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Na inona na inona fotoana hiainganao, na izany aza, ny fitsangatsanganana any Karaiba dia anjoria hatrany. Raiso ny sakeli-dalana etsy ambany: eo amin'ny 10,5 maily eo ho eo (eo amin'ny 17 km) ny fiakarana an-tendrombohitra St. Catherine mankany an-tampony sy ambadika, amin'ny alàlan'ny lalana tsy mitsaha-miakatra izay mahatratra 500 metatra ambonin'ny ranomasina, ary avy eo no ahitanao ny Five Islands (Nosy Dimy) ao Trinidad, mitsivalana manamorona ny morontsiraka avaratrandrefan’ilay nosy. Satria vita tsara ny lalana, dia malaza amin'ny mpitaingina bisikileta koa izy.
Iray amin'ireo tazana avy ao amin'ny Tendrombohitra Ala Voanio (Coco Hill Forest) any Barbados. Sary avy amin'i Annalee Davis, nahazoana alalana.
Mety tsy ho iray amin'ireo hetsika voalohany tonga ao an-tsaina any Barbados ny fandehandehanana an-tongotra satria nosy somary fisaka izy io — saingy manampy amin'ny fanovana fijery izany ny Coco Hill Forest. Mampiseho sehatra maitso mivelatra sy mamelona kokoa, izay tsy mitovy amin'ny tolotra fizahan-tany voaravaka sy voaloko ao amin'ny nosy ny fitsangantsanganana amin'ilay fananana mifaka (fambolena fary taloha).
Iray amin'ireo tazana mahavariana avy ao amin'ny Breezy Hill, izay mitodika mankany amin'ny renivohitr'i Trinidad, Port of Spain. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Breezy Hill, lalana mitsangatsangana eo ambonin'ny Lady Chancellor Road manatrika ny Port of Spain, renivohitr'i Trinidad, manome tazana mahavariana amin'ny lafiny rehetra: ireo havoana mianavaratra mankany Maraval, ireo tehezan-tendrombohitra andrefana manatrika ny “ambanin'ny nosy (down the islands)”, ary mitodika mianatsimo mankamin'ny tanàna, mankany amin'ny Oalan'i Paria. Mety ho sarotra ny dia raha toa ka tsy zatra ny tany ianao, amin'ny fizarana iray tena mideza ka mamatotra tady amin'ny hazo kesika ao amin'ny faritra ireo efa za-draharaha mba hanampiana ireo mbola zazavao.
Raha vantany vao azonao ny aretin'ny fandehanana an-tongotra, dia te-hanao fanamby bebe kokoa hatrany ianao, ary hahita toerana sy faritra mahaliana kokoa.